Inqaba ye-sage yokuzonwabisa
Uyolo lwasemva kwendlu, loba kanye ebhankini!
Ichwayitile kwaye iphangalele, le ndlu isanda kulungiswa inegumbi elinye ihleli nje iimitha ezingama-50 ukusuka elunxwemeni lwe-East Fork yoMlambo i-Bitterroot, idume kuzwelonke ngokuloba okumangalisayo. Ikwisiphelo esisemazantsi e-Bitterroot Valley,?I-Riverside Cottage yinqaba yabantu abalumkileyo bezolonwabo.
Iindawo eziyintlango kunye namahlathi kazwelonke ajikeleze i-Riverside Cottage, ikhaya leencopho eziphakamileyo, imijelo ecacileyo yekristale kunye nezilwanyana zasendle ezininzi. Ukusuka emagqagaleni ukuya ekuhonjisweni kakuhle, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile eNtabeni, kunye nokukhwela ihashe zininzi izinto ezinokwenzeka.Kodwa ngomlambo umganyana nje womgama osuka kumnyango ongasemva, unokuhendeka ukuba uchithe lonke ixesha lakho kanye apho. Zityale ngoxolo kwitafile yepikiniki okanye kwenye yeendawo zokuphumla ezinentyatyambo kwaye ubukele amanzi entaba omlingo aqengqeleka.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye kukho igrill ye-BBQ kwiveranda egqunyiweyo ejonge ngasemlanjeni, yenzela ukutyela okunomtsalane emva kwendlu. Ekupheleni kosuku ungagoqa kwibhedi yendlovukazi, okanye i-sofa ekhululekile yobukhulu bokumkanikazi kwigumbi lokuhlala.
Ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane nedolophu yase-Darby, ngolwakhiwo lwasentshona olwahlukileyo unokuva ubukho obubambekayo bokugityiselwa kwegolide ngalo lonke ixesha kolu luntu luncinci lukhulayo. Uya kufumana neevenkile ezininzi ezisempilweni, iindawo zokutyela, imisitho yeDarby Rodeo Association kunye nokufikelela kwiLake Como emangalisayo.
Umphathi wakho wePropati ngu-Amy Sage (406) 369-0644
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho nceda ufowunele okanye uthumele umyalezo ku-Amy.